स्वास्थ्य मन्त्रालयले कन्डम बाँड्ने, गृह मन्त्रालयले अपराधी ठान्ने ? — Himali Sanchar
काठमाडौ – नेपाल एउटा सानो देश हो। यो थोरै मात्रामा शहरी एरिया रहेको गाउ“ नै गाउ“ले घेरिएको, प्राकृतिक रूपमा अत्यन्तै सुन्दर र सभ्य मुलुकका रूपमा छाप छोड्न सफल मुलुक हो। विगतमा राणाकालीन, मल्लकालीन, शाहवंशीय राज्यका रूपमा फरक–फरक समयमा फरक–फरक पहिचान दिदै आएको यो मुलुक यतिबेला लोकतान्त्रिक मुलुकका रूपमा परिचित छ। यो देशमा समयसगै देखा परेका राजनैतिक परिवर्तनसगै सामाजिक रूपमा पनि उत्तिकै परिवर्तनीय हुँदै गएको छ।
विगतमा महिला भनेको घरभित्रै चुलो चौकोमा सीमित हुनुपर्ने जातका रूपमा लिइन्थ्यो भने अहिले देश विकास र निमार्णका क्रममा आधा हिस्सा ओगटेका महिलाको भूमिका पनि सबै क्षेत्रमा बराबरी हुनुपर्ने विषयमा कानुनीरूपमै व्यवास्था हुदै आएको छ।
यसका साथै हिजो लुकी छिपी १/२ महिलाले अपनाउन बाध्य यौनको पेसा अहिले स्वैच्छिक पेसा र कानुनीरूपमै मान्यता पाउनुपर्नेसम्मका आवाज सार्वजनिक भइरहेका छन्। यतिमात्र नभई यौनकर्मी महिलाको समूह नै विस्तार भई उनै महिलाको आवाजलाई बुलन्द बनाउन जागृति महिला महासंघ नामक गैरसरकारी संस्था नै गठन भएको छ। यो संस्था हाल नेपालका १२ जिल्लामा सञ्चालनमा आएको र २ सय ५२ जना सदस्य नै बनिसकेको संस्थाका पूर्वअध्यक्ष विजया ढकाल बताउँछिन्।
विगतमा यौनका कुरा गर्नु सामाजिक र कानुनीरूपमा नै अपराधसरह मानिदै आएको विषयमाथि अहिले खुलेर बहस हुनुका साथै कानुनीरूपमै यौनकर्मीले पेसागत मान्यता पाउनुपर्ने माग लिएर राज्यसामु खडा भइसकेका छन्। विगतमा पनि अघोषितरूपमा ठूलाबडाले महिला हिंसा र यौन हिंसा गर्दै नआएका होइनन्। तर त्यतिबेला हिंसापीडित महिलाको आवाज बुलन्द हुन सकेको थिएन। पछिल्लो समय विभिन्न संघसंस्था, महिला अधिकारकर्मी, मानवअधिकार, कानुनी परिमार्जनले गर्दा यौन हिंसाको शिकार भएर बाच्न बाध्य समुदाय फरक–फरक ढंगबाट आफ्ना आवाज बुलन्द पार्न सफल भएका छन्।
यसै विषयलाई बुलन्द पार्दै महिला जागृति महासंघकी पूर्वअध्यक्ष ढकाल भन्छिन्– ‘कहा“ छ मानवअधिकार? यौनकर्मी महिलालाई मानवअधिकारले छोएकै हुदैन। यौनकर्मी महिलामाथि समाजका अगुवा भन्नेले हेर्ने दृष्टिकोण नै दानवजस्तो छ। समाजले नै कतिपय महिलालाई यौनजन्य पेसामा लाग्न बाध्य बनाउँछ, उसलाई समाजमा विकृति फैलाउने नराम्रो मान्छेका रूपमा अपमान गरिन्छ र कुदृष्टिले हेरिन्छ। उसलाई मानवको दृष्टिले हेरिदैन।
यिनै कारणले गर्दा यौनकर्मी महिलाका पक्षमा वकालत गर्नकै लागि जागृति महिला महासंघको स्थापना गरिएको हो र यसले यस्ता पेसामा लाग्ने महिलालाई खुलेर म यौनकर्मी महिला हो भनी समाजका अगाडि परिचय दिन सक्ने बनाएको छ। तर राष्ट्रसामु यो पेसालाई अधिकारका रूपमा स्थापित गरिदिनुपर्‍यो भनेर हिडेका छैनौं। हाम्रो खोजी भनेको यौनकर्मी महिलाले के गलत गरेका छन् ? के यौनकर्मी महिला अपराधी हुन् ? हामी अपराधी हौं ? हामी अपराधी हैनौं हामीले ड्रग बेचेका छैनाैं, ज्यान मार्ने काम गरेका छैनौं, अपराधको कठ्घरामा हामीलाई नराख मात्र यति भनेका छौं।’
यता स्वास्थ्य मन्त्रालयले कन्डम बाड्ने काम गर्छ र एचआईभीलाई शून्यमा पुर्‍याउनुपर्छ भन्छ। देशव्यापी अभियानकै रूपमा ठूला–ठूला गाडीमा सयर गर्नेदेखि झोला भिरेर हिड्नेसम्मले कन्डम बोकेर हिड्छौं। अर्कातिर राज्यकै जिम्मेवार निकाय गृह मन्त्रालय अन्तर्गत कार्यरत प्रहरी प्रशासनले त्यही कन्डम बोकेको आधारमा समातेर थुन्छ। ‘के कन्डम बोकेर हिड्नै नहुने हो त ? यो सरकारको कमजोरीको पराकाष्टा नै हो। गर्भ निरोधक अस्थायी साधनका रूपमा सरकारले मान्यता दिएको कन्डम बोक्नु अपराध हो भने सरकारले किन यसलाई विज्ञापन गरिरहेको छ ? हरेक दिन रेडियो, टेलिभिजनमा सुनिन्छ कन्डम लगाउँ एचआईभी एड्स भगाउ ? यो के मजाक गरेको हो ?’ –ढकालले सरकारप्रति आक्रोश व्यक्त गर्छिन्।
सरकारले वास्तवमै एचआईभीलाई शून्यमा पुर्‍याउने र जन्मान्तरलाई प्राथमिकतामा राखेको हो भने यौनकर्मी महिला पनि जोखिममा छन् र उनीहरूलाई पनि समेटेर एकआपसमा समन्वयात्मक भूमिका खेल्दै अघि बढ्नुपर्छ भन्नेतर्फ सोच्नुपर्छ। राज्यले मानवीयरूपमा सबै मानिसलाई हेरोस् र यौनकर्मी महिला पनि यही देश र समाजका नागरिक हुन् भन्ने कुरा नबिर्सियोस्। समस्यालाई सम्बोधन गर्दै अघि बढ्नुपर्छ। होटल रेस्टुरेन्टमा यतिजना महिला कन्डमसहित समातिए, आपत्तिजनक अवस्थामा समातिए भनिरहदा त्यहा जाने पुरुष को थिए भन्ने किन सार्वजनिक गरिन्न ? किन महिलालाई मात्र सार्वजनिक गरिन्छ ?
यौनजन्य कार्यमा महिलामात्र हैन पुरुष नै पहिला जान्छन र महिलालाई बाध्य पार्छन्। अझ भन्ने नै हो भने तिनै प्रहरी पहिला यौनको प्यास मेटाउन यौनकर्मी महिलाको खोजी गर्दै पुग्छन् र आफ्नो काम सकेपछि महिलालाई विभिन्न लान्छना लगाएर कन्डमसहित पक्राउ गरेको भनेर बदनाम गर्छन् भन्दै ढकालले आरोप लगाइन्। ढकालले केही समयअघि बालाजुको एउटा रेस्टुरेन्टमा पक्राउ परेका महिला यौनकर्मी प्रहरीकै ग्राहक बने र पछि पक्राउ परे। चौकीमा पुग्दा महिलाले कन्डम बोकेर बसेको अवस्थामा फेला पारेको रिपोर्ट प्रहरीले बनायो। खोइ त प्रहरी नै ग्राहक बनेर गएको थियो भन्न सकेको ? रिपोर्टमा उल्लेख भएजस्तो कन्डम बोकेकै आधारमा प्रहरीले महिलालाई अपराधीलाई जसरी थुनामा राख्न मिल्छ ? कुन निकायमा गएर हामीले बोल्ने ? हामी कहा जाने ? जस्ता गम्भीर प्रश्न उठाउदै सार्वजनिक कार्यक्रममा ढकालले सरकारलाई लक्षित गर्दै यस्ता प्रश्न अघि सारेकी हुन्।
उनले एचआईभी संक्रमितले म एचआईभी संक्रमित हो भनेर खुल्न नसकेको अवस्थामा यौनकर्मी महिलाले म यौनकर्मी हो भनेर कसरी खुल्न सक्छन् ? जस्ता अनगिन्ती प्रश्नको ओइरो लगाउदै सरकारको भूमिका नै एकआपसमा बाझिएको छ भन्ने कुरालाई उनले उजागर गर्न खोजेकी थिइन्। नेपाल परिवार नियोजन संघले विश्व जनसंख्या दिवस मनाउन आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा ढकालले बोलिरहदा नेपाल सरकारका प्रहरी, स्वास्थ्य राज्यमन्त्री पद्मा अर्याल, चिकित्सक, समाजसेवी साथै नागरिक समाजका अगुवा पनि सोही पंक्तिमा रहेका थिए।
एउटा छोरा मान्छेले आफ्नो घरपरिवार र श्रीमतीलाई झुक्याएर क्षणिकका लागि एउटा महिलामाथि लगानी गर्छ। तर ऊ सजायको भागिदार कहिल्यै हुदैन तर ती महिला किन यौनकर्मी भइन् भनेर सोध्दैन ? यसको प्रमुख दोषी महिला नभएर पुरुष हो। तर दोष किन महिलालाई मात्र लगाइन्छ ? उनले यस्ता खाले सयौं प्रश्न ओइर्‍याएर यौनकर्मी महिलाले समाजको चुनौतीका कारण उपचारसमेत अर्को थलोमा गएर गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको समेत औल्याइन्। नेस